Sida loo isticmaalo Screen ah Green on iMovie
A 'Green Screen' saamayn waa marka aad soo gooyay mawduuca ka gudahood video la duubay dhigay isticmaalaya hortegi lahaa cagaaran ama buluug ah ka dibna waxa superimpose gal video clip kale. Tusaale ahaan lahayd haddii aad si ay u qoraan sida naftaada cabsi hore ee asalka ah cagaar iyo ka dibna ku rid in video clip on muujinaya libaax socda idiin. Waxay u egtahay la yaab leh, sax?
Tani waa technology la mid ah in badan oo filimada miisaaniyadda weyn waxaa lagu sameeyey gudahood oo Actorada waxaa lagu muujiyey sameeyo dhicin stunts Ibliisku sida boodayaa dhismayaasha dhaadheer ama baabuur xawaare sare. Si kastaba ha ahaatee, waxaan halkan u joogaa in aan kuu sheego in haatan waxa kale oo aad ka dhigi kartaa filim Green Screen ee idinkaa iska leh isticmaalaya iMovie. Ha noo eegno deg deg ah ugu tallaabooyinka ku lug leh hawshan.
Qaybta 1aad: Sida loo sameeyo iMovie Green Screen on Mac
Qeybta 2: Sida loo sameeyo iMovie Green Screen on iPhone / iPad
Qeybta 3: Waa maxay 'Green Screen' saamayn?
Talaabada 1: Qor video ah oo la isticmaalayo si fiican loo shiday, asalka cagaaran adag oo markaas u badbaadin on your Mac. Hubi in ay daqiiqad dhamaadka duubay aan lahayn mawduuca ku yiilleen sida ay sheegayaa iMovie, waxa ay tahay in la soo gooyay, waayo, video in la superimposed.
Talaabada 2: Burcad app iMovie ku saabsan Mac iyo bilowdo mashruuc cusub.
Talaabada 3: In la hubiyo in ay Tools Advanced la demin on.
Talaabada 4: From browser Mashruuca, dooran video aad ayaa diiwaan soo jeeda cagaaran, waxaad dooran kartaa clip oo dhan ama kaliya duwan jir gaar ah). Sida ugu dhakhsaha badan kuu jiidin doorashada ka badan mid ka mid ah clips ee mashruuca, waxa ay noqon uun clip midab, clip ah kartoon ama wax video kale oo aad rabto in la superimposed in, suuqa kala gujisid a furi doonaa. Dooro ikhtiyaarka ah 'Green Screen' ka daaqadan cusub.
Talaabada 5: Waxaad arki doontaa in Screen ku Green clip hadda ka soo muuqan doono kor ku clip jeeda in aad rabto in aad isticmaasho ee aad mashruuca. Si aad u qabsato saamaynta, si fudud u jiidi 4 geesood in la beddelo looxyada clip ah. Markaad dhammayso samaynta isbedeladan, riix 'qabtay' button si loo badbaadiyo Screen saamayn iMovie Green ka.
Your video clip haatan diyaar u yahay inuu la ciyaaray saamaynta Screen Green.
Si loo sameeyo Screen video Green on iPhone ama iPad, waxaad u baahan doontaa app ah Green Screen lagu daro iMovie. Wixii buugan, waxaan noqon doonaa iyadoo la isticmaalayo mid ka mid ah Green Screen ugu fiican Apps halkaas, FX ku Green Screen Movie. Waxaad ka soo dejisan kartaa halkan .
Talaabada 1: Si aad u bilaabaan duubo, istaagi hore ee asalka ah cagaaran ama screen.
Talaabada 2: Hadda, aan bilowno Screen Movie app ee Green FX aad iPhone ama iPad iyo weeraray button diiwaanka. Si aad u buuxiso Screen ku Green ee asalka ah mid ka mid ah fursadaha horena ah clips live sida baaruuda leh, ama daruuro leh buuraha, si fudud garaac qaybta cagaar ah oo aad iPhone ama iPad shaashadda. Eeg sawirka hoose in ay muujinaysaa sida app ay isbedesho asalka la clips kala duwan.
Tallaabada 3: Marka aad diiwaan video sida aad u doonayay, mar kale ku dhuftey button Record in ay joojiso duubo. App ayaa si toos ah badbaadin doonaa file aad u. Si aad u duubo, guji icon Settings ku geeska gacanta midigta sare ee suuqa kala app.
Talaabada 4: Hadda, aad dajiyaan karaa this video to your computer u tafatir dheeraad ah si uu u siiyo eegno safeeyey isticmaalaya iMovie.
Talaabada 5: Marka sameeyo, aad diyaar u tahay in ay la wadaagaan video looga cabsado oo idin ​​abuuray isticmaalayo saamaynta Screen Green leh inta kale ee adduunka.
Sidii hore ee maqaalka ku xusan, saamayn Screen Green waa marka aad soo gooyay mawduuca ka mid video dhigtay kadib markii cagaaran ama buluug ah oo superimpose gal video clip kale in la sameeyo video cusub wadajir. Qaar badan oo filimada miisaaniyadda weyn waxaa lagu sameeyey oo isticmaalaya farsamada la mid ah. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah ugu wanaagsan ee Green saamayn Screen video-baarka in aad internet-ka ka heli kartaa.
Tusaale 1 - https://www.youtube.com/watch?v=98M1tt4dTZc
Just video ah in oo soo bandhigtay xoogga iyo isticmaalka badan oo ka mid ah 'Green Screen' saamayn.
Tusaale 2 - https://www.youtube.com/watch?v=T1m0ORVdsQc
Video bandhigaya ay u wadday toogasho ah movie Superman ee caanka ah, Man of Steel.
Tusaale 3 - https://www.youtube.com/watch?v=Kjcv-JtUOgA
Eeg sida goobta caanka ah ee Matrix la toogtay oo la Keanu Reeves fogaado rasaas badan.
> Resource > iMovie > Sida loo sameeyo iMovie Green Screen on Mac / iPhone / iPad